Olana voa eo amin'ny alika? Jereo ny antony | Tontolo alika
Ny olana amin'ny voa eo amin'ny alika dia mitranga noho ny antony maro, noho izany dia zava-dehibe ny mazava izany ny voa dia tena ilaina ao amin'ny vatana ary ny olana rehetra amin'ny fandidiana ve dia mety hisy vokany lehibe eo aminy. Ny tsy fahombiazan'ny voa na ny tsy fahombiazan'ny voa dia aretina mahazatra mahazatra, ary tsy io irery no misy fiatraikany amin'ny biby.
1 Aretin'ny voa ao amin'ny alika
1.1 Vato voa ao anaty alika
1.2 Pyelonephritis amin'ny alika
1.3 Ny nefritis sy ny nephrosis amin'ny alika
1.4 Ny tsy fahombiazan'ny voa amin'ny alika
2 Azo sitranina ve ny tsy fahombiazan'ny voa amin'ny alika?
3 Sakafo ho an'ny alika manana olana amin'ny voa
4 Ny alika ve afaka miaina amin'ny voa iray monja?
5 Fanadinana sy fitsaboana
Aretin'ny voa ao amin'ny alika
Ny voa, ankoatry ny fanadiovana ny vatan'ny fako, dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fandanjana ny tsiranoka sy ny electrolytes. Izany no mahatonga ny olana amin'ny voa ao amin'ny biby fiompy hita taratra manerana ny vatana. Ny soritr'aretina voalohany dia mifandraika amin'ny zava-drehetra izay ny rafitra urinary ary raha simba ny voa dia tsy azo ovaina ny vokany.
Noho io antony io dia tsara ny manana a fampahalalana marobe sy lisitr'ireo aretina voa ao amin'ny alika ary ny soritr'aretina izay famantarana ny fanairana ary mitaky fitsidihana maika ny mpitsabo biby ary anisan'ny fepetra mety hitranga amin'ny alika manimba ny voa ny:
Ny vato ao anaty alika dia vato misy habe samihafa izay noforonina tamin'ny fanangonana mineraly. Mazava ho azy fa misy fiantraikany amin'ny sakafo, ny pH ary ny habetsahan'ny rano lanin'ny biby fiompy izany. Ny vato voa dia miteraka fanaintainana sy fahasarotana amin'ny fivalanana, tsy fahazakana, ra ao amin'ny urine, fisian'ny grit sns.
Azo atao ny mandinika ny fandroahana vato fa rehefa mitranga izany dia tokony hoentina any amin'ny tobim-pahasalamana ny biby fiompy mba hanatanterahana ny fanadinana ilaina mba hahitana ny antony namoronana azy. Ny tsy fandrosoana haingana dia mety hitarika any amin'ny tsy fahombiazan'ny voa ateraky ny sakana na ny fivoahana.
Ny vato dia azo amboarina amin'ny calcium, struvite, uric acid, sns. Miankina amin'ny fitaovana mamolavola azy ny fitsaboana. Amin'ny tranga tsy dia henjana dia misy fanitsiana sasany amin'ny sakafo sy ny fanafody. Etsy ankilany, raha lasa sarotra ny raharaha dia ilaina ny fandidiana.
Pyelonephritis amin'ny alika
Pyelonephritis amin'ny alika dia aretina voa vokatry ny bakteria izay misy fiantraikany amin'ny ureter. Ity aretina ity dia mipoitra avy amin'ny aretin'ny tatavia izay efa nandroso ka nisy fiantraikany tamin'ny voa. ihany koa ny lesoka eo amin'ny fahaterahana dia mety miteraka aretina ary ny aretina dia mety hiseho amin'ny fomba mivaingana na maharitra.
Raha marokoroko ny soritr'aretina dia mety ho tazo, tsy fahasalamana, mandoa ary manaintaina ny lamosina ary rehefa mimi. ny ny biby dia afaka mijoro miaraka amin'ny tongotra henjana sy vatana mikitroka. Ny pyelonephritis mitaiza dia mety hivoatra aorian'ny pyelonephritis maranitra. Amin'ity tranga ity, ny famantarana dia ho anorexia, fihenan-danja, fanesorana ny urine betsaka kokoa ary fitomboan'ny fihinanana rano.
Ny nefritis sy ny nephrosis amin'ny alika
Ny nefritis dia fivontosana mifandraika amin'izany hepatita, ehrlichiosis, pancreatitis ary borreliosis. Na izany aza, nephrosis dia vokatry ny fiovana mihena vokatry ny fahamamoana zava-mahadomelina. Amin'ny toe-javatra roa, ny alika dia mampiseho ny nephrotic syndrome, miaraka amin'ny edema, ascites ary ny pleural effusion. Ny Nefidrotika dia azo tsaboina tsara raha mihetsika haingana ianao ary mamaritra sy manafika ny antony namokatra azy.
Matetika io aretin'ny voa io ary miavaka amin'ny tsy fahafahany manala ny fako amin'ny vatana. Izy io dia afaka maneho amin'ny endrika maranitra na maharitra ary manafika indrindra ireo biby fiompy antitra. Izy io dia mety hiteraka sakana, vaky ny tatavia, hatairana, tsy fahombiazan'ny fo, manapoizina, sns.
Ity aretina ity dia tsy misy soritr'aretina raha tsy efa tsy azo averina intsony. Ny tsara indrindra dia ny fanatanterahana fitsapana famoronana kreatininina matetika, izay hany fomba tokana ahafantarana azy io mialoha. Voamarina ara-potoana dia handroso ilay mpitsabo biby mamolavola sakafo manokana, tsy maintsy mitazona fisotroana rano sy fanafody tena tsara hanohitra ny soritr'aretina ianao. Ankoatr'izay, tena zava-dehibe ny fandinihana ny biby fiompy.
Azo sitranina ve ny tsy fahombiazan'ny voa amin'ny alika?
Ny tsy fahombiazan'ny voa amin'ny alika dia misy fahasimbana maharitra. Raha voa iray monja ilay voakasik'izany dia afaka manonitra ny tsy fifandanjana amin'ny voa sisa ny taova nefa tsy maneho fahasarotana amin'ny biby. Raha tsy izany dia miankina amin'ny fikolokoloana ny fahasalamana sy ny kalitaon'ny alika sy ny fitsaboana veterinary.
Sakafo ho an'ny alika manana olana amin'ny voa
Misy izany marika miaraka amin'ny sakafo manokana ho an'ny alika manana olana amin'ny voa. Mazava ho azy, izy io dia misy famahanana sira ambany miaraka amin'ireo singa izay tsy mitaky asa be amin'ny voa. Ho fanampin'izay, ny fatran'ny phosforus dia tokony hofehezina satria ny alika dia mirona hanana azy io avo. Manampy an'izay fa ilaina ny mitazona tsara ny biby fiompy.
Ny alika ve afaka miaina amin'ny voa iray monja?
Raha ilaina izany ary mandroso ny aretina hanala ny voa iray amin'ny fandidiana, dia mety hanana fiainana milamina ny biby fiompy miaraka amin'ny taova iray miasa ihany. Mazava ho azy dia mila fikolokoloana biby bebe kokoa, sakafo sy fanafody arakaraka ny fitsaran'ilay matihanina.
Fanadinana sy fitsaboana
Alika salama misotro rano 50 ml isan-kilao eo ho eo isan'andro. Rehefa mihoatra ny rano 100 ml isaky ny kilao isan'andro io sanda io dia azo antoka fa misy ny olana. Mifandraika amin'ity fitsipiky ny telo ity, dia mety hipoitra ny aretim-pandevonan-kanina matetika na soritr'aretin'ny mony.
Ny mpitsabo anao dia hanao fitsapana ra ary indrindra indrindra jereo ny haavon'ny urea ao anaty ra (uremia) ary ny haavon'ny kôlinina amin'ny rà (kreatinine). Ireo mari-pamantarana roa ireo dia ahafahantsika manombatombana ny hamafin'ny tsy fahombiazan'ny voa ary izany dia ny alika misy tsy fahombiazan'ny voa dia hanana urine be dia be ary ho ambany ny sandan'ny haavon'ny urinary.
Tsipika fitsapana urine izay mamantatra ny proteinina, ny ra, ny siramamy ary ireo singa tsy ara-dalàna hafa ao amin'ny urine. Sitrika urinina hita eo ambanin'ny mikraoskaopy Mahita ny antony tsy fahombiazan'ny voa avy amin'ny bakteria alika, kristaly urinaly, sela tsimatimanota, sela urinary ...
Mety hatao koa ny ultrasound amin'ny kibo na ny taratra X. hijerena raha mety hanimba ny voa ny alika ny fahasimban'ny voa na ny fanakanana ny lalan-dra. Farany dia azo atao ny biopsy voajanahary hijerena ny fahasalaman'ny voa ary hanomezana ny marina ny antony raha sendra misy tsy fahasalamana hatrany am-bohony, ohatra, na ny vinavina fanasitranana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Olana voa ao amin'ny alika
Alika kely Brabantino